Guddiga Dastuurka BJFS oo hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee loo doortay in ay ku biiraan guddiga – Kalfadhi
Guddiga Dastuurka BJFS oo hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee loo doortay in ay ku biiraan guddiga
May 4, 2019 May 4, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Guddiga dastuurka baarlamanka JFS ayaa hambalyo u diray isla markaasna soo dhoweeyay labada xildhibaan ee galabta loo doortay in ay ka mid noqdaan guddiga la socodka iyo dib-u-eegista dastuurka ee baarlamanka.
Qoraal lagu baahiyay bogga bulshadda ee guddiga ayaa lagu qoray hambalyada xildhibaanada cusub
Xildhibaan Sayid-cali Cabdulqaadir Macalin iyo xildhibaan Siciid Maxamed Xayd ayaa bedelaya AU naxariistee Axmed Mayow CAbdulle iyo Xildhibaan Abdirashiid Maxamed Xasan oo ka mid noqday xukuumadda, sida uu sheegay guddigu.
Doorashada laba xubnood oo ka dhinnaa guddiga la socodka iyo dib-u-eegista dastuurka ayaa saacado badan ku qaadatay golaha shacabka. Wuxuu ahaa mid ka mid ah kulamadii ugu dheeraa ee goluhu yeeshay teer iyo bishii hore.
Waxaa doorasho qarsoodi ah ku tartamay saggaal mudane labada kursi. Doorasho laba wareeg ah ayaa ka dhacday golaha. Kursi ka mid ah waxaa ku tartamay shan mudane kan kalena afar mudane, sida uu ku waramayo weriyaha Kalfadhi.
Baarlamanka JFS oo doortay xubno ka dhinnaa guddiga la socodka iyo dib-u-eegista dastuurka dalka